မောင်ကျေးရေ - တို့ရေ တို့အနာဂတ် - *မောင်ကျေးရေ - တို့ရေ တို့အနာဂတ် * *(မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈၊ ၂၀၁၈* (photo credit - http://proximitydesigns.squarespace.com) ရေသည် သဘာဝကပေးထားသော လက်ဆောင...
Black Panther the movie-- - https://en.wikipedia.org/wiki/Black_Panther_(film)
Black Panther trailer-- - https://video.search.yahoo.com/yhs/search?fr=yhs-mozilla-001&hsimp=yhs-001&hspart=mozilla&p=Black+Panther#id=0&vid=d268a71a96cd3adb0abde9c0fe1c0df2&action=click
... နှောင်ကြိုး ... - ညာဘက်ခြေထောက်ကို ဆောင့်ဆွဲလိုက်သလို တင်းခနဲ စစ်ခနဲ ဖြစ်သွားလို့ ကိုယ့်ခြေထောက်ကို ငုံ့ကြည့်လိုက်တယ်။ ဘယ်က ဘယ်လို လာရစ်ပတ်နေမှန်း မသိတဲ့ စွန် မှန်စာကြိုး ...
Indonesia’s minority report - Indonesian law recognises both international human rights norms and 'religious values'. The latter are increasingly taking precedence. The post Indonesia...
နွေဦး(၈)..... - ဆောင်းမကုန်သေးပါဘဲ ဥသြဟာ စောစီးစွာတွန်မြည်ခဲ့လေပြီ...။ နွေဦးရောက်တော့မယ်ဆိုတာ ကြိုပြီးသတိပေးလိုက်သလိုပါပဲ... ဆောင်းအငွေ့အသက်တွေဆိုလို့ မနက်ခပ်စောစောမှာ...
ထားဝယ် သို့ ချစ်သောမြေ တောင်ပိုင်း (သိမ်း) - ငါးနာရီလောက်မှာ နေထွက်တာကြည့်ဖို့ နိုးလာတယ်။ မျက်နှာသစ်ပြင်ဆင်ပြီးတာနဲ့ သုံးထပ်တိုက်ခေါင်မိုးပေါ်ကိုတက်တယ်။ ခေါင်မိုးပေါ်ကနေ ထားဝယ်မြို့ကိုခြုံထားတဲ့ မြူ...
တစ်ဖက်ပိတ် - ဒီမြို့မှာ အမှန်တရားက တခုပဲရှိတယ် အဲဒီတော့ သတင်းမီဒီယာတွေတောင် ပဲ့တင်ပြန်ပြန်ပြောကြ အပိုစကား ဆွံ့အလို့။ ဒီမြို့မှာ ဇာတ်လမ်းတွေက တဖက်သတ်ပဲပြောတယ် ရွေးချယ်စရာ...
ခင်မျိုးချစ် – ဒီလောက်တောင်ဉာဏ်တုံးရသလား - *ခင်မျိုးချစ် – ဒီလောက်တောင်ဉာဏ်တုံးရသလား(အတွေးအမြင်မဂ္ဂဇင်း၊ ရန်ကုန်) မိုးမခ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၈* Stories and Sketches of Myanmar ထဲမှ ဒေါ်ခင်မျိုးချစ်ရေးေ...
ကိုယ့်စံပါယ်... - ဘေးဘယ်ညာမှာ ကားရှင်းပြီဆိုတာနဲ့ လမ်းတဘက်ကိုကူးလာလိုက်တဲ့အခါ ပျံ့ကနဲ သင်းတဲ့ရနံ့ကို ရှူသွင်းလိုက်ရင်း ကြည်လင်အေးမြစိတ်ကတဖက်၊ နှုန်းချိသွားသလို စိတ...
Former President Ronald Reagan Vs Racist Donald Trump - Maung Zarni shared King’s America has morphed back into KKK’s under Trump. i am notafan of Reagan and his unashedly “free market” upward distribution of...
What is the NLD Doing for Political Prisoners? - It was Jan. 4, 2018. As it was also the 70th anniversary of Myanmar’s independence, I could not help thinking about my days in prison. Independence Day is ...
My Life Will Go On (33) - In my literary life, in 2008, my translated book ‘Alice in Wonderland’ in Burmese was awarded from Tun Foundation for the Children Literary Genre. At that...
တင်မိုးရဲ့ မစ္ဆရိယ (ပါဠိversion) - တခါတရံ ကဗျာတွေ ဖတ်တယ်။ တခါတရံ သီချင်းတွေ နားထောင်တယ်။ တခါတရံ ကဗျာတွေ သီချင်းတွေ ပါဠိဘာသာပြန်တယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ ကဗျာလည်း ဖြစ် သီချင်းလည်းဖြစ်တဲ့ “မစ္ဆရိယ”ကို ...
သီဖွဲ့လွမ်းချင်း - မနက်ခင်းဟာ မနက်ခင်းမဟုတ်တော့တာ ဘယ်လောက်ကြာခဲ့ပြီလဲ စက္ကန့်တွေ... ညဟာလဲ ညမဖြစ်တော့တဲ့ အမှောင် သက်သက် နာရီများ.... ခိုကလေးတွေ ညည်းသံ ဟာ တစိမ့်စိမ့်ကြေကွဲ...
အိမ်ပြန်ချိန် - ခါတိုင်းလိုပဲ မောင်ဒေးနဲ့ထိုင်နေကျဆိုင်မှာထိုင်ပြီး ၁၀ နာရီလောက်မှာ မထချင်ပဲ ထခဲ့တယ်။ ဘန်ကောက်မြို့လည်ကနေ ကိုယ်နေတဲ့ အစွန်အဖျားကို ရောက်တဲ့ ဘတ်စ်ကား ၁၃၈ ကိ...
Fruit Gathering - I remembered having nightmares the night before that incident. It had been ages since I last delivered lunch to my husband at noon. One such day on ...
ဘလော့ဂ်စပေ့ါ မိုဘိုင်းဗားရှင်း - ဘလော့ဂ်စပေါ့မှာ မိမိဘလော့ဂ်ကို လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ မိုဘိုင်းဗားရှင်း လုပ်လို့ရနေပါပြီ။ သင့်ဘလော့ဂ်ကို ဟန်းဖုန်းကနေပါ ၀င်ဖတ်လို့ရအောင် အောက်ပါအတိုင်း ပြုလုပ်ပေး...